Itoobiya oo sheegtay in ay duqeyn ku dishay 70 ka tirsan Al shabaab - Halbeeg News
Itoobiya oo sheegtay in ay duqeyn ku dishay 70 ka tirsan Al shabaab
ADDIS ABABA (HALBEEG) – Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in duqeyn ciidamadeeda cirku ka fuliyeen gudaha dalka Soomaaliya, lagu dilay ugu yaraan 70 dagaalyahan oo ka tirsanaa Ururka Al shabaab.
Wakaaladda Wararka Itoobiya ee FANA ayaa baahisay in bartilmaameedka duqeyntu ahaa mileeshiyaad ka tirsan Al shabaab, kuwaas oo qorshaynayey in ay weerar gaadmo ah ku qaadaan fariisin ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah hawlgalka nabad Ilaalinta ee AMISOM.
Taliyaha Ciidamada Cirka Itoobiya Sarreeye Guuto Yilma Merdassa, ayaaa sheegay in ciidamadiisu duqeynta kahor sameeyeen qorsheyn iyo odoros aad u xeel dheer, isagoo intaas raaciyey in qorshahaasi sidii loogu talo galay u fulay.
Duqeynta oon la shaacin goobta iyo goorta ay dhacday, waxaa sida warbixinta FANA ku xusan lagu gubay labo gaari oo la sheegay in Al shabaab hub ugu rarnaa.
Cutubyo ka tirsan ciidamada Itoobiya ayaa sannadkii 2011 gudaha usoo galay dalka Soomaaliya, tallaabadaas oo Dowladda Itoobiya ku micnaysay in ay tahay mid lagu caawinayo Dowladda Soomaaliya, si looga adkaado kooxaha argagixisada gaar ahaan Al shabaab.
Saddex sano kaddib oo ku aaddanayd sannadkii 2014, ciidamada Itoobiya waxay si rasmi ah uga soo biireen hawlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee magaciisa loosoo gaabiyo AMISOM, gaar ahaan qaybta saddexaad ee fadhigeedu yahay gobollada Baay iyo Bakool.
Madaxweyne Paul Kagame oo cafis u fidiyey maxaabiis ay ku jirto mid kamid ah hogaamiyayaasha mucaaradka
Xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo ku dhaawacmay qarax gaarigiisa loogu xiray